घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू कहिलेकाहीँ उनीहरुसँगको कुराकानी
हाम्रो लेखले तपाईंलाई सदाबहार बनेगा बचपन कहानी, जीवनी तथ्यहरू, परिवार, आमा बुबा, प्रारम्भिक जीवन, जीवनशैली, प्रेमिका / पत्नी, बच्चाहरू निजी जीवन र अन्य लोकप्रिय घटनाहरू को बचपनको दिनदेखि नै उहाँ लोकप्रिय भएपछि पूरा कभरेज दिन्छ।
हो, सबैलाई थाहा छ उनीहरुको कुशलताका साथ बौद्धिक र बहुमुखी playmaking क्षमताहरु को बारे मा थाहा छ तर केहि कम भने हाम्रो एवर बनेगाको बायो जो धेरै चाखलाग्दो छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
एभरेक्सिमिलियानो डेभिड बनेगा उपनाम दिएट्याang्गुटो”जून १ 29 1988 को जून २ th तारिखमा रोजारियो, सान्ता फे अर्जेन्टिनामा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो बुबा, डेनियल बनेगा र उनकी तुलनात्मक रूपमा अज्ञात आमामा जन्मनुभएको थियो।
बेन्गाले शहरमा रोजारियो शहरमा फुटबल खेल्न थाले जहाँ खाली बच्चाहरूका लागि शून्यता समाप्त हुन्छ जब उनीहरूको खुट्टामा फुटबल हुन्छ र उनीहरूको हातमा ट्रफी हुन्छ।
रोजारियो, त्यो शहर जहाँ हुन्थ्यो एक province of Santa Fe, some 180 miles from Buenos Aires (Argentine capital). Itsafootball city withapopulation of 1.2 million inhabitants which is roughly divided into two distinct camps.
Those who follow नेवेलको पुरानो केटाहरू (लियोनेल मेस्सी युवा क्लब) र दोस्रो, समर्थकहरूको Rosario Central, जसले नेवेल ओल्ड ब्वाइजलाई अर्जेन्टिनाको कडा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। तिनीहरूको क्लबहरू समावेश; बोका जूनियर्स र नदीको प्लेट.
This by implication means Rosario is the city where एन्जिल डि मारिया, लिओनेल मेस्सी, Mascherano र Ezequiel Lvezzzi सबै बढ्यो। एभ ब्यानगायतका सबै दलहरू, जब तिनीहरू साना केटा थिए।
Ever Banega Biography Story – प्रसिद्धिको कारण:
बनेगा बोका जुनियर्समा युवा समुहको माध्यमबाट आएका थिए, पहिलो टीम १ at मा पुग्यो, र उसले आफ्नो माथिको औसत उत्तीर्णको लागि तत्काल मान्यता प्राप्त गर्‍यो। एक जनाकोलागि उनी जवानसँग झगडा सम्झन्छन् लिओनेल मेस्सी जब ऊ अझै नेवेलको ओल्ड ब्वाईजमा उसको व्यापार सिक्दै थियो।
विरुद्ध खेल्दै लिओनेल मेस्सी युवावस्थामा, बनेगाले भन्यो;…"यो बिरूद्ध खेल्नको समयको बर्बादी थियो लिओनेल मेस्सी जो त्यस समयमा एक बौने जस्तै देखिन्थ्यो। मेस्सीले हामी सबैलाई मुर्ख तुल्यायो। उहाँ एउटा सानो बौने हुनुहुन्थ्यो र उहाँको किट उहाँकै लागि एकदम ठूलो थियो, तर ऊ के गर्थ्यो त्यो पहिले नै एकदम राम्रो थियो। ”
मिडफिल्डरको टोली पछि फर्नोडोगोगो जनवरी २०० 2007 मा रियल मैड्रिड सरेका, बानेगा आफ्नो युवा उमेरको बावजुद उनको उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्त गरियो। पछि बोका जुनियर्समा, उसलाई जहिले पनि पिच छोड्दा उसलाई खडा ओभिएसन दिइन्थ्यो। 5th जनवरी 2008 मा, अन्तिम चमत्कार आयो। बेनेगाले वेलेंसियासँग खेल्ने यूरोपलाई फोन गर्यो। बाकि, जुन तिनीहरूले भन्थे, अब इतिहास हो।
प्रत्येक महान पुरुषको पछाडि, त्यहाँ एक महान महिला, वा यस्तै भनाइ छ। र लगभग हरेक अर्जेन्टिना फुटबलर पछाडि, एक ग्लैमरस पत्नी वा प्रेमिका छ। Valeria जुआन पत्नी र पूर्व बचपनाको प्रिय प्रेमिका हुन्। दुबै प्रेमीले भेटे पछि उनलाई उनको श्रीमान्को जंगली व्यवहारलाई जाँच्नका निम्ति श्रेय दिइन्छ।
परिवारमा, डेisy पनि छ, तिनीहरूका कुकुर अगोस्टिना भन्दा पुरानो हो भन्ने अर्थ हो यो वर्षको साथ उनीहरूको साथमा। आफ्नो पति जस्तै, वेलेरिया रोजारियोको पनि छ र रोशनी संस्कृतिलाई गहिराइमा राखिएको छ जसले बच्चाहरुलाई थोपा अगोस्टिना जस्ता भान्सामा सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्दछ।
कहिल्यै बनेगा परिवार जीवन:
आज, लगभग सबै रोजारियोको मध्यम र निम्न; क्लास परिवार विगतका बलिदानहरूको सम्झनामा एकताबद्ध छ। “कुनै समय, हामी खानको लागि केहि बाँकी थियो भिजेको माटो थियो; यो एक कडा पालनपोषण थियो, " बेनेगाले उनको शिशु र पारिवारिक संघर्षको सम्झना दिलाउँछ।
यो नोट बेग्लै उल्लेखनीय छ कि दुवै बेनेगा र एन्जिल डि मारिया family have been close for years. It was the latter’s family who helped out through their tiny coal-making shed to make ends meet between Ever Banega’s games asayoungster.
There were also acquainted with the family of लिओनेल मेस्सी। जो एक अधिक धनी पृष्ठभूमि को हो। यद्यपि, तिनीहरूको परिवार २००१ को अर्जेन्टिना स crisis्कटबाट मुक्त थिएन।
सत्य भनिएको छ। अर्जेण्टीना पेसोको अचानक अवमूल्यनले न्यूयल फुटबल क्लबलाई अझ बढी बनाएन लियोनेल मेसी हार्मोन उपचार। यसकारण लियोनेल मेसी परिवार 13 को उमेर मा कातालानिया (स्पेन) को उत्प्रेरित भयो।
'मेरो बुबा र आमाले कडा परिश्रम गर्न मलाई र भाइहरूलाई सल्लाह दिनुभयो। म खेलौना वा खेलहरू थिए जब म सानो थिएँ, केवल एक फुटबल। म मेरा आमाबाबुले गरेको सबै कुराको लागि पूर्ण रूपमा आभारी छु। तिनीहरूले जहिले पनि मलाई धक्का दिए। उनीहरू र खास गरी मेरी श्रीमतीविना मसँग अहिलेसम्म भएको त्यस्तो अविश्वसनीय यात्रा हुने थिएन। '
पहिले नै भनिएझैं यो उनको पत्नी हो जसले उनको कुख्यात व्यवहार बदल्नको लागि उसको लागि सबै चीजहरू बनाउँदछ। सँधैका शब्दहरूमा;… “म १ at मा पुगेँ र गल्ती गरे। मैले वर्षौको लागि खेर फालें र चिन्ताहरू लिएँ। अब म बदलिएको मान्छे हुँ, परमेश्वर र मेरी श्रीमती भलेरियालाई सबै धन्यवाद। ”
अब हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछौं गल्तीहरू र खराब भागका तथ्यहरू of Ever Banega। तल पढ्नुहोस्!
बनेगालाई एक पटक उसको व्यवहारमा यति अनुशासित, अव्यवस्थित र अपमानजनक मानिएको थियो जसले उनको क्लब भ्यालेन्सियाले उनीमा पूर्ण आशा गुमायो। सत्य भन्ने हो भने, बोका जुनियर (अर्जेन्टिना) बाट स्पेनको भ्यालेन्सिया (युरोप) मा २-मिलियन डलरको चाल यसको परिमाणकै हास्यास्पद थियो।
उनको आगमनको दिन भित्र, इन्टरनेटमा नग्न बेनेगामा एक भिडियो देखा पर्यो “अपरिचितहरूको लागि उसको जॉयस्टिकलाई अशुद्ध पार्ने र रमाइलो पार्ने” आफ्नो वेबकैममा, यो वेल्सेनियाका अधिकारीहरूको अनुसार थियो। क्लिपले कथित रूपमा बेन्गा आफ्नो कम्प्युटरमा च्याट गर्दै देखाउँछ “कुरा आफ्नै हातमा लिएर”।
निश्चित रूपमा, एक क्षण अर्जेन्टिनाको लागि कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। रिपोर्टहरूले पछि यो भिडियो किशोर किशोरी बोका दिनहरूको पुरानो फुटेज हो भनेर देखाए जुन भलेन्सियालाई लाज लाग्यो।
मिडफिल्डरको फोटो भ्यालेन्सियाका प्रतिद्वन्द्वी रियल म्याड्रिडको शर्ट लगाएको जब इन्टरनेटमा देखा पर्‍यो भने एभरे बनेगाले एकपटक भ्यालेन्सिया फ्यानहरूको रिसलाई जोखिममा पारेको छ। फोटो कथित पारिवारिक भ्रमणको बेला लिइएको थियो। यसले एभरे बानेगा आफ्ना दुई आफन्तहरू सँगसँगै मुस्कुराइरहेको देखायो।
वैलिसियाले छविको व्याख्या गर्न मिनिफिल्डरलाई सोध्थे, किनकि उनीहरूले प्रयोग गरेनन् कि अर्जेण्टीनाले अझै पनि सबै गलत कारणहरूको लागि सुर्खेत बनाएको छ। कुनै व्याख्या पेश गरिएको छैन। क्लब आफ्नो मामला मा असहाय थियो र मात्र मुद्दा को आराम को अनुमति दिइयो।
कहिल्यै बनेगा तथ्यहरू - आफ्नै कार द्वारा हिट भइरहेको:
प्लेमेकर एभ बेन्गा एक पटक एक टङ्क एङ्क संग आफ्नो कार द्वारा चलाउन पछि एक्शन देखि बाहिर गए। यो 2012 फेब्रुअरीमा भयो।
के प्रशंसक अपमानित भयो कि दुर्घटना भेलेन्सियाको दोस्रो चरणको सेमीफाइनल कोपा डेल रे बार्सिलोना मा झडप को पूर्व संध्या मा भयो। यो एक खेल हो जुन क्लबलाई उसलाई आवश्यक थियो। अर्जेन्टिनी खेलाडीले विपक्षी प्रबन्धकको बावजुद यो खेल हराउनुपरेको थियो पेप Guardiola जवान प्रतिभामा प्रशंसा गर्दै।
२०१२ सिजनको सुरूमा, बनेगाको फेरारी आफ्नो भ्यालेन्सिया प्रशिक्षणको लागि आगोको ज्वालामा फसे। मिडफिल्डर बाहिर चल्दैन, तर तिनको पाउन्ड 250,000 कार पूर्ण रूपमा लेखिएको थियो। बेन्गालाई पासोहरू सोध्न भनिएको छ - आगो राख्न पानीको बाल्टीको लागि। सौभाग्य देखि, आगो ब्लेड कुनै चोट लाग्नु अघि पुग्यो।
जब भ्यालेन्सियाले उनलाई एटलेटिको म्याड्रिडमा edण दियो, रातो कार्ड, रातमा राती पार्टी गर्ने र अनुशासनिक जरिवानाले उसको नराम्रो केटाको प्रतिष्ठामा थपथाप गर्यो। यो सबैलाई थाहा थियो कि अर्जेन्टिनाले स्पेनी नाइटलाइफको आनन्द उठाए जस्तो अरू साथीहरू जस्तो थिएन। आफ्नो क्यारियरको शुरुमा, बनगालाई बिहानको बिहान (3::30०) रक्सीको प्रभावमा गाडी हाँक्नको लागि बाहिर तानियो।
यो पनि रिपोर्ट गरिएको छ कि जब मिडफिल्डर २ 24 वर्षका थिए, उनी शुक्रबार बिहान तालिमबाट हराइरहेका थिए (भ्यालेन्सिया बार्सिलोनासँग शुक्रवार पछि बार्सिलोनासँग क्रन्च खेलको लागि)। उनलाई असंख्य फोन कल राखिएको थियो तर कुनै प्रतिक्रिया छैन। पछि, यो देखियो कि बनेगा अघिल्लो रातबाट पिएर पनि तालिममा आएका थिए। यसको शाब्दिक अर्थ हो कि उसले रात यति गहिरो पिए।
२०० 2007 को गर्मीमा, बनेगाले आफ्नो जन्मजात अर्जेन्टिनाका लागि अण्डर २० वल्र्ड कपमा म्यानचेस्टर सिटीको मनपर्दो अभिनय गरे। सर्जियो अगुरो.
क्यानाडाको टूर्नामेंटमा अर्जुन अर्जेन्टिनाको जितमा उनको प्रदर्शनको लागि जवान प्लेमकरको प्रशंसा गरिएको थियो। केहि खेलाडीहरू (बान्गा सहित) स्पष्ट रूपमा उनीहरूको होटलको कोठालाई रद्द गरेर उनको जीत मनाउन निर्णय गरे।
पहिले नै भनिएझैं जब बनेगाले स्पेनी पक्ष भलेन्सिया सीएफसँग हस्ताक्षर गरे। उसको व्यवहारको कारण हताश हुँदै उनीहरूले उसलाई एथलेटिको म्याड्रिडमा edण दिए ताकि उनी ह्यान्डल गर्न सकून् डिएगो सिमीन। २०१ 2014 मा एट्लिटिकोबाट फर्किए पछि, यस्तो देखिन्छ कि भ्यालेन्सिया अझै पनि उसको उपस्थितिमा ठीक थिएनन्। तिनीहरूले उसलाई अंग्रेजी पक्ष एभर्टन जहाज गर्न निर्णय गरे।
उनको बारेमा कथाहरू, ब्रिटिश बोर्ड एजेन्सीले पृष्ठभूमि जाँच सञ्चालन गरिसकेपछि उनीहरूको दिमाग परिवर्तन गर्दा उनीहरूको भिसा उपलब्ध गराउँदा उनको मन परिवर्तन भयो। यसैले Everton मा उनको कदम समाप्त भयो।
हाम्रो बानेगा लेख अहिले सम्म पढ्न को लागी धन्यबाद। हाम्रो टोली सही र निष्पक्षता को लागी प्रयास गरीरहेको छ बचपनको कथा र जीवनी तथ्य of Tanguito।
यदि तपाईं कहिले देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सँधै नमिल्ने जस्तो देखिन्छ भने, कृपया टिप्पणी सेक्सनमा छलफल गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 28